လုပ်သား | Open Development Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူရွယ်ဦးရေ လျှင်မြန်စွာ တိုးပွားလာမူ့သည် နိုင်ငံ၏ လူမူစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူ စီမံကိန်းများ အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက် လိ်မ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူငယ် ဦးရေ မြင့်တက်လာပြီး အဆိုပါ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရရှိရန်ကျွမ်းကျင်မူ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မူနှင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမူဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ရန်လိုအပ်လျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအလုပ်သမတစ်ဦးပုံ ဤပုံကို မေလ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့၊ Flickr တို့မှရိုက်ထားပြီး CC BY-NC-ND 2.0 လိုင်စင်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။
နိုင်ငံ၏ လုပ်သားအင်အား ပါ၀င်မူ့ တွင် အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ အချိုးမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၆၃.၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး လုပ်သား အင်အား အချိုးသည် အမျိုးသားများတွင် (၈၁.၇) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများတွင် (၄၇.၁) ရာခိုင်နှုန်း သာရှိသဖြင့် အမျိုးသားများတွင် ပိုမို မြင့်မားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ လူဦးရေ နှင့် အိမ်အကြောင်း အရာ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ၏ ၃.၉ ရာခိုင်နှုန်း မှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန် လျှောက်ထား ကြသော်လည်း အလုပ်ရရှိမူ့ မရှိကြောင်း သိရသည်။ တနိုင်ငံ လုံးရှိ အလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေ အချိုးအစားတွင် အမျိုးသား ဦးရေမှာ ၃.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး ဦးရေ ၄ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ရှိရာ ထပ်တူနီးပါး ဖြစ်သည်။1
အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အရွယ်များသည် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် ငါးဖမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံး ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ၄၂.၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ အလုပ် လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ ဒုတိယ အများဆုံး အလုပ်မျိုး အစား မှာ “Elementary Occupation” ဖြစ်ပြီး ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ယင်းနောက်မှ ၀န်ဆောင်မူ့နှင့် အရောင်း လုပ်ငန်း တွင် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသည်။ လက်မူ့ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကုန်သွယ်မူ့ လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ မြင့်မားပြီး ဖော်ပြချက်များ အရ အလုပ် လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေ ၁၁.၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။2
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေး ဦးရေ ၁၂.၁၄၆ သန်းကျော်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ကလေး အရေ အတွက် ၁.၂၇၉ သန်း ရှိရာ စုစုပေါင်း ကလေး ဦးရေ၏ ၁၀.၅ ရာခိုင်နှုန််း ဖြစ်သည်။ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူ ကလေးအားလုံးတွင် ၅၂.၉ ရာခိုင်နှုန်း (၆၇၆,၂၀၈)မှာ ယောကျာ်းလေး များဖြစ်ပြီး ၄၇.၁ ရာခိုင်နှုန်း (၆၀၂,၇၀၁) မှာ မိန်းကလေး များ ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ကလေးများ ဟု ဆိုရာတွင် အဆိုပါ ကလေးများသည် ပြီးခဲ့သည့် ၇ ရက် အတွင်း ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မူ့ နှင့် ၀န်ဆောင်မူ့ လုပ်ငန်းများတွင် တစ်နာရီ (သို့မဟုတ်) ထို့ထက် ပိုသော၊ အချိန်ပြည့် (သို့မဟုတ်) အချိန်ပိုင်း လုပ်ကိုင်သော၊ လစာရှိသော (သို့မဟုတ်) မရရှိသော ငှားရမ်း ခိုင်းစေ ခံခဲ့ရသူ များအား ဆိုလိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြား ကလေး ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်မှာ စာသင်ကျောင်းတွင် တက်ရောက်လျှက် ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း (ILO) မှ ထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်း များ အရ ကလေး လုပ်သား အများအပြားမှာ ပညာသင်ကြားခွင့် ပျောက်ဆုံးနေပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ကလေး ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကျောင်းတက်ခွင့် ရလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။3
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အလုပ်သမား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးသည် အမျိုးမျိုးသော အလုပ်သမား ဥပဒေများ အား တစစီ ဆွဲထုတ် အသုံးပြုထား ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဥပဒေ အများစုမှာ ၁၉၂၀ မှ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့သော ဥပဒေ များမှ ဖြစ်သည်။ အစိုးအရမှ ပြည်တွင်း အလုပ်သမား အင်အားများအား ပိုမိုအားကောင်းစွာ ကာကွယ်ရန်် ဥပဒေများအား ပြုပြင်မွန်းမံ ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ယခုနှစ်များ အတွင်း ပြုလုပ်ရန်် အားထုတ် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။4
ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ အစိုးရ လက်ထက် က စတင်ခဲ့သည့် အခြား ဥပဒေ အများအပြားကဲ့သို့ အလုပ်သမား ဥပဒေ အများစုမှာ ကိုလိုနီ ခေတ် အတွင်းမှ ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် အသက်၀င်ကာ အကျိုးသက်ရောက်ဆဲ ဖြစ်သည်။ လတ်တလော အဖြစ်အပျက်တွင် ၁၉၂၃ ခုနှစ်အလုပ်သမားများ လျော်ကြေး အက်ဥပဒေ အား ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ၁၉၂၆ ခုနှစ် The Trade Union Act အား ၂၀၁၂ တွင် ပြန်လည် ပြုပြင် ခဲ့သည်။ The Trade Union Act မှာ ၂၀၁၁ နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမူ့ အပြီး ပထမဆုံး ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် ဥပဒေဖြစ်ပြီး ယင်းနှင့် အတူ ၁၉၂၉ ခုနှစ် the Trade Disputes Act (ဝါဏိဇ်ဇ ပဋိပက်ခမှု အကျဥပဒေ) အား ရုတ်သိမ်းခဲ့ သည်။ ယင်းဥပဒေများ နေရာတွင် အလုပ်သမား အဖွဲ့ အစည်း ဥပဒေအား ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ၄င်း၊ အလုပ်သမား ရေးရာ အငြင်းပွားမူ့ ဖြေရှင်းရေး ဥပဒေ အား ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ၄င်း အသီးသီး အစားထိုး ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် Payment of Wages Act ဥပဒေမှာ အကျိုး သက်ရောက်ဆဲ ဖြစ်သည်။5
နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ၀န်ထမ်းများ အတွက် လတ်တလော အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ဗီဇာ မရရှိသေး သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်လိုသော နိုင်ငံခြားသားများ အနေဖြင့် နေထိုိင်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့် ဗီဇာနှင့် အထူး ပြန်လည်၀င်ရောက်ခွင့် ဗီဇာ ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ ခွင့်ပြုမိန့်များအား မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ့ ကော်မရှင် မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခွင့် ပြေစာ ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီများမှာ အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် အလွယ် တကူ ရရှှိနိုင်ပါသည်။6
၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ၏ အဖွဲ့၀င် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ILO မှ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဆိုင်သော ဘေးကင်းလုံခြုံမူ့ နှင့် ကျန်းမာရေး နယ်ပယ် များအတွက် ငွေကြေးနှင့် အတတ်ပညာ အကူအညီ များ ရရှိခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ နယ်ပယ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တည်ဆဲဥပဒေများ၊ လုပ်ရပ်များ၊ စည်းကမ်းနှင့် စည်းမျဉ်းများမှာ ခေတ်နှင့် လျော်ညီခြင်း မရှိပဲ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရယ် များအားလုံးကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသလို ပြင်ဆင်ခြင်း လည်း မရှိသေး ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း (ILO) မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင် ခံစာများ အရ သိရသည်။7
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း (ILO) မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင် ခံစာ အရ အန္တရယ် ရှိသော လုပ်ငန််းများ တွင် အလုပ်လုပ်နေသော ကလေး လုပ်သားများဟု ဆိုရာတွင် ရုပ်ပိုင်းအရဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းအရ ဖြစ်စေ၊ လူမူ့ရေးအရ သို့မဟုတ် ကျင့်၀တ် အရ ကလေးငယ်များ အား အန္တရယ် ဖြစ်စေခြင်းနှင့် ဒုက္ခ ရောက်စေခြင်း များ အပြင် အချိန််ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်စေခြင်း များ ပါ၀င်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း (ILO) မှ ထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်း များ အရ အန္တရယ် ရှိသော လုပ်ငန််းများ တွင် အလုပ်လုပ်နေသော ကလေး များ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဖုန် နှင့် အန္တရယ် ရှိသော အခိုး အငွေ့အသက် များရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်နေရပြီး ၁၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အန္တရယ် ရှိသော ပစ္စည်း ကိရိယာ များ နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ ကလေး ၁၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာလည်း အလွန်် အေးသော (သို့မဟုတ်) အလွန် ပူသော လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အလုပ်လုပ်ရပြီး ၉.၈ ရာခိုင်နှုန််းမှာ အန္တရယ် ရှိသော ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ နှင့် ပတ်သတ်သည့် လုပ်ငန််းခွင် တွင် အလုပ် လုပ်နေရသည်။ ကလေးငယ် ၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အခြားသော အန္တရယ် ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်များ တွင် အလုပ်လုပ်နေရကြောင်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း အစီရင် ခံစာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၂၂ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်် ရှိ ကျောက်စိမ်း တူးဖော်သည့် တွင်းများ အနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မြေပြိုမူ့ကြီးတွင် အနည်းဆုံး လူ ၁၁၆ ဦး သေဆုံးပြီး အခြား လူဦးရေ ၁၀၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ မြေပြိုမူ့သည် ယခုနှစ်ပိုင်းများ အတွင်း ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ကျောက်စိမ်း တူးဖော်သည့် တွင်းများတွင် လေးကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပွားသည့် ကြီးမားသည့် မြေပြိုမူ့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြေပြိုမူ့တွင် ပါ၀င်သည့် သေဆုံးသူ အများစုမှာ စွန့်ပစ် ကျောက်ပုံများ အပေါ် နှင့် အနီးအနားတွင် ကျောက်စိမ််း အပိုင်းအစ များအား ရှာဖွေ ရောင်းချသူများ ဖြစ်သည်။8
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ တွင် အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားလစာ ဥပဒေ သစ်အား ၁၉၄၉ ခုနှစ် အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားလစာ အက်ဥပဒေ နေရာတွင် အစားထိုးခဲ့သည်။ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန က အထည်ချုပ် စက်ရုံများတွင် စိုးရိမ်စရာ အငြင်းပွားမူ့များ အပြီး ယာယီ အနိမ့်ဆုံး လုပ်အားလစာ တစ်လလျှင် ၅၆၀၀၀ ကျပ် (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၅) အား ၂၀၁၂ အတွင်း သတ်မှတ် ခဲ့သော်လည်း အနိမ့်ဆုံး လုပ်အား လစာ ဥပဒေသစ်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် နို၀င်ဘာ လ အထိ ကြေငြာခြင်း မပြုခဲ့ချေ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းမှ ကိန်းဂဏန်းများ အရ အလုပ်သမား များ အတွက် တစ်ရက် ပျမ်းမျှ လုပ်အားခ မှာ ၄၇၆၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး နေ့စား အလုပ်သမား များ အတွက် မှာ ၄၂၈၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နှုန်းထား အရ မြို့ပြနေထိုင်သူများမှာ ကျေးလက်တွင် နေထိုင်သူများထက် လုပ်အားလစာ ပိုများ ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အလားတူ အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများ ထက် လုပ်အားလစာ ပိုမို ရရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်။ ၀န်ဆောင်မူ့ပေးသည့် အလုပ်အကိုင် ကဏ္ဏများ သည် လုပ်အားခ နှုန်းထား အမြင့်ဆုံး ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။9
၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များ အရ ယခင် နေထိုင်ခ့ဲသည့် အရပ်မှ လက်ရှိ နေမြဲ အရပ်သို့ ရွှေ့ပြောင်း လာသူ (၅၃) ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျား/မ အုပ်စု နှစ်ခုလုံး အတွက် ရွှေ့ပြောင်းရသည့် အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ “မိသားစု နောက်လိုက် သဖြင့်” နှင့် “အလုပ်ကြောင့်/ အလုပ်ရှာရန်” တို့ ဖြစ်ပါသည်။ “မိသားစုနောက် လိုက်သဖြင့်” အကြောင်းရင်းသည် အမျိုးသားများ (၃၂%) ထက် အမျိုးသမီး များ (၄၉%) တွင် ပိုမို မြင့်မားပြီး “အလုပ်ကြောင့်/အလုပ်ရှာရန်” အတွက် ရွှေ့ပြောင်းမူ့တွင် အမျိုးသားမျး (၄၇%) က အမျိုးသမီး (၂၃%)ထက် ပိုများကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။10
လူဦးရေ နှင့် အိမ်အကြောင်း အရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များ အရ အိမ်ထောင်စု၀င် (၂)သန်း ခန့် သည် နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိ နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လူဦးရေတွင် ကျား (၁.၂) သန်းပါ၀င်ပြီး နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိ နေထိုင်လျက် ရှိသည့် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ (၆၁) ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင် ပါသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် ရောက်ရှိနေထိုင်သူများ အနက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရောက်ရှိနေထိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ နိုင်ငံခြား ရောက်ရှိနေသူ (၂) သန်းခန့် အနက် (၁.၇) သန်းခန့်မှာ အသက် (၁၅-၃၉) အတွင်းဖြစ်ပြီး (၈၃) ရာခိုင်နှုန််း ရှိကာ အဆိုပါ ဦးရေတွင် (၁.၁) သန်းသည် အမျိုးသား များ ဖြစ်ပါသည်။11
1. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
2. Demographic, Healthcare and Education from MIMU Baseline Data (Union and State/Region level): https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=demographic-healthcare-and-education-from-mimu-baseline-data-union-and-state-region-level
3. Labor and employment regulatory framework in Myanmar: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=labor-and-employment-regulatory-framework-in-myanmar
4. Luther: Labor Law in Myanmar 2016 https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/labour-law-in-myanmar-march-2016
6. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
7. National profile on occupational safety and health Myanmar: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=national-profile-on-occupational-safety-and-health-myanmar
8. The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2015/nov/23/113-dead-100-missing-in-myanmar-jade-mine-landslide
9. Myanmar labour force, child labour and school to work transition survey 2015 Executive summary report: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=myanmar-labour-force-child-labour-and-school-to-work-transition-survey-2015-executive-summary-repor
10. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
11. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
မန္တလေး အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြပွဲအား ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ကတိပြု
MOEAF မှ မလေးရှားသို့ အလုပ်သမား ပို့ဆောင်ခြင်းအား ပိတ်ပင်ထားမူအား ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆို
အလုပ်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မူ့ ခံရပြီးနောက် အထည်ချုပ် စက်ရုံ ပိတ်သိမ်း
MICS လုပ်သားများ သူတို့ ၏ အခွင့်အရေးအတွက် တောင်းဆို
အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ကော်မတီ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း